Uncategorized – Akoneshare.com
တရုတျ-မွနျမာ သဘောတူညီခကျြမြား တှငျ ထူးထူးခွားခွား ပါဝငျခွငျးမရှိ ============================== တပျမတျော မှ ဂကျြတိုကျလယောဉျမြားက မွနျမာ လကွေောငျး ပိုကျနကျ အတှငျး အသှားရော အပွနျပါ ကွိုဆို ပို့‌ဆောငျနှုတျ ဆကျခွငျးမြား၊ နပွေညျတျော ရှိ လမျးတလြောကျ ပနျးမြားနဲ့ ဝဝေဆောဆာ ကွိုဆိုခဲ့ခွငျးမြား၊ ရနျကုနျ မွို့တျော ခမျးမရှေ့ က ဆန်ဒပွပှဲ၊ ဖဈေဘုတျကနေ ရှီကငျြဖငျြ့ ရဲ့အမညျကို မွနျမာ မှ အင်ျဂလိပျဘာသာ ပွနျဆိုတဲ့ အယျဂိုရီသမျမှ Mr.Shithole လို့ မှားယှငျး ပွနျဆိုမိတဲ့ အတှကျ ဖစျေ့ဘုတျကနေ တရားဝငျ တောငျးပနျခဲ့ရခွငျးမြားနဲ့ အတူ တရုတျ သမ်မတ ရှီကငျြဖငျြ့ ရဲ့ ‘သမိုငျးဝငျ’ ခရီးစဉျသညျ စနနေေ့ နလေ့ညျ ၂:၄၅ …
Continue reading “တရုတျ-မွနျမာ သဘောတူညီခကျြ ထူးထူးခွားခွားမပါဝငျ”
ညောငျလေးပငျမွို့တှငျ ရဲအငျအား ၁၀၀ကြျောဖွငျ့ လောငျးကစား‌ ပွုလုပျသညျဟု ဆိုသညျ့ နရော၂၀ ကို တဈပွိုငျတညျးဝငျ‌ ရောကျဖမျးစီး ရာ ၂ ဦးဖမျးစီးရမိ ညောငျလေးပငျ ဇနျနဝါရီ ၁၇ ။ ပဲခူးခရိုငျ ရဲတပျဖှဲ့မှ ဦးဆောငျ၍ ဇနျနဝါရီလ ၁၆ ရကျ နံနကျပိုငျးက ညောငျလေးပငျမွို့အတှငျးရှိ လောငျးကစား‌နရောမြားအား ရဲအငျအား ၁၀၀ ကြျောဖွငျ့ တဈပွိုငျတညျး ရှာဖှဖေမျးစီးခဲ့ကွောငျး ညောငျလေးပငျ မွို့မရဲစခနျးမှသိရသညျ။ ထိုကဲ့သို့ရှာဖှဖေမျးစီးရာတှငျ ညောငျလေးပငျရဲတပျဖှဲ့အပါ အခွား မွို့နယျမြားမှ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားပါပူးပေါငျး၍ စုစုပေါငျး အငျအား၁၀၀ ကြျော၊ အဖှဲ့ပေါငျး ၂၀ ကြျောဖွငျ့ နရော ၂၀ ကြျောကို တဈခြိနျတညျး တဈပွိုငျတညျး ဝငျရောကျရှာဖှခွေငျးဖွဈ‌ကွောငျး၊ နှဈနရောကနေ နှဈလုံးထီလောငျးကစားလုပျသူ အမြိုးသားတဈဦးနှငျ့ အမြိုးသမီးတဈဦး ဖမျးဆီးရမိ‌ကွောငျး …
Continue reading “ညောငျလေးပငျမွို့တှငျ ရဲအငျအား ၁၀၀ကြျောဖွငျ့ လောငျးကစား‌ ပွုလုပျသညျဟု ဆိုသညျ့ နရော၂၀ ကို တဈပွိုငျတညျးဝငျ‌ ရောကျဖမျးစီး ရာ ၂ ဦးဖမျးစီးရမိ”
ကမ်ဘာနိုငျငံရေးကစားကှကျထဲက မွနျမာ ICJ မှာ အမစေု သှားရငျဆိုငျတုံးက ထူးခွား ခကျြတှေ အမြားကွီး ရှိခဲ့ပါတယျ ဒီဆှေးနှေးခကျြနဲ့ ပါတျသကျတာ လေး ခုဘဲ ရှေးခယျြ သှားမှာပါ *ပထမတခကျြ*က ၁၃. ၁၂ . ၂၀၁၉ ရကျ နယျသာလနျမှာ အမစေု့ ကို သှားရောကျဝနျးရံ ကွတဲ့ မွနျမာတှနေဲ့ တှဆေုံ့ပှဲမှာ အမေ ပွောသှားတဲ့ စကားပါ ” လိုအပျတဲ့ အခြိနျမှာ အခုလို ဝနျးရံ ပေးကွတဲ့ အတှကျ ကြေးဇူးတငျတယျ ” ဆိုတဲ့အပွငျ ကြေးဇူး ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျကိုပါ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ ကြေးဇူး ဆိုတဲ့စကားဟာ အမစေု ပွောခဲလှနျးတဲ့ စကားပါ ရငျထဲက နှဈနှဈကာကာ ပွောတာဆိုလို့ ဒီတကွိမျဘဲ …
Continue reading “ကမ်ဘာနိုငျငံရေးကစားကှကျထဲက မွနျမာ”
တောင်ကြီးမြို့ (၄)လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုအား မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ (၂)ရက်အတွင်း ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများနှင့် သက်သေခံပစ္စည်းများဖော်ထုတ် နေပြည်တော်၊ မေ ၁ ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ကန်သာယာရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာလမ်း၊ အမှတ်(၁၁၈)နေ ဒေါ်အေးရွှေ ၇၀နှစ်၊ ရှမ်း/ဗုဒ္ဓ (မြင်းဖြူနှစ်ကောင်တိုင်းရင်းဆေးတိုက်ပိုင်ရှင်)၊ (ဖ)ဦးအန်ပန်သည် ပင်လုံမြို့၊ ကမ္မဌာန်းကျောင်းတိုက် ဆွမ်းကပ်လှူပွဲသို့ သွားရောက်ပြီး ၂၈-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း နေအိမ်သို့ ပြန်ရောက်စဉ် နေအိမ်အဝင်ပေါက် ကားဂိုဒေါင်အောက်တွင် သားမက်ဖြစ်သူ စိုင်းဆေမွန်(ခ)ဆေမွန်အား လည်းကောင်း၊ နေအိမ်အပေါ်ထပ် ယာဘက်အခန်းအတွင်း သမီးဖြစ်သူ မနန်းခမ်းလှိုင်နှင့် မြေးဖြစ်သူ စိုင်းဖဖ တို့အား လည်းကောင်း၊ ဝဲဘက်အခန်းအတွင်း၌ အိမ်ဖော် ဖြစ်သူ မအေးမိုးအား လည်းကောင်း၊ ပြင်ပဒဏ်ရာအသီးသီးဖြင့် သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး နေအိမ်ရှိ ရွှေထည်ပစ္စည်းမျိုးစုံ (၁၅)မျိုး၊ ငွေကျပ်သိန်း (၄၀)အပါအဝင် စုစုပေါင်းတန်ဖိုး …
Continue reading “လေးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှု မိပြီ”
မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းချတဲ့အခါမှာ ကုန်သွယ်ခွန် ပြေစာတံဆိပ်ခေါင်းကပ်ရမယ်လို့ ညွှန်ကြားချက်ထွက်လာလို့ မြို့နယ်အခွန်ရုံးက ခေါ်ယူရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါတယ် ညွှန်ကြားချက် လိုတိုရှင်းက –👉 ပြေစာအပေါ်ကျသင့်ငွေရဲ့ ၅% ကို စာသုံးသူထံမှ ထပ်မံကောက်ခံပါ။ ပြေစာအပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ပါ။ ယခင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့် စားသောက်ဆိုင်၊ ဟိုတယ်၊ ရုပ်သံလွှင့်လုပ်ငန်း တို့နှင့် ဥပမာပေးပါတယ် 👉 အဆင့်ဆင့် လက်ပြောင်းလက်လွှဲရောင်းချမှု (တင်သွင်းဖြန့်ချီသူမှ လက်ကားသမား၊ လက်လီကြီးသမား၊ လက်လီအရောင်းဆိုင်ငယ်) လည်း ၅% ကပ်ရမည်။ 😳😳😳 👉 မိမိတို့ခန့်မှန်းရောင်းအားအပေါ် မူတည်၍ အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းကို ကြိုတင်ထုတ်ပေးထားမည်။ (ဒါကတော့ လုပ်ငန်းရှင် ဝန်မပိအောင် ငွေပေးချေစရာမလိုဘဲ ကြိုထုတ်ပေးထားတာပါ) 👍 👉 ထပ်မံထုတ်ယူသည့်အခါ အသုံးပြုပြီးသည့် တံဆိပ်ခေါင်းတန်ဖိုးမှ ခုနှိမ်စရာ အထောက်အထားရှိပါက ခုနှိမ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ 👍 ဥပမာ –ပထမအကြိမ် တံဆိပ်ခေါင်းကို ငွေပေးစရာမလိုပဲ ထုတ်ပေးထားမယ်။ ဥပမာ ၁၀ သိန်းဖိုး …
Continue reading “ဖုန်းဝယ်ယူသုံးစွဲသူများ အခွန်အထပ်ထပ်ဆောင်ရနိုင်သည့် ဖုန်းဝယ်လျှင် ကုန်သွယ်ခွန်တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ရမည့် စနစ်အကြောင်း Unique မှ ဦးကျော်ဆန်းဦး ပြောပြတာလေး ကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်”
ဗိုလ်​ချုပ်​​ကျော်​ဝင်း က ဦးသန်း​ရွှေ ရဲ့ ဝှက်​ဖဲတစ်​ချပ်​လို့​ဗေဒါကဆိုပါတယ်​ ယ​နေ့ ဗို​လ်​ချုပ်​​ကျော်​ဝင်း သူရထားတယ်​​မြေ​တွေ ထိုင်​​ရောင်းပြီ ​​အေး​ချမ်းစွာ​နေထိုင်​​နေပါတယ်​….သူရခဲ့တဲ့​မြေ​တွေဟာ ဒီတစ်​သက်​စားမကုန်​ သုံးမကုန်​နှိင်​တာ ဦးသန်း​ရွှေရဲ့ ဆုလာဒ်​​ပေလား ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဝင်း(ငြိမ်း)အကြောင်း စစ်ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိဟောင်း တစ်ဦး ဖွင့်ချ————————————————————————————ဝင်းနိုင်သောင်းBurmaDemocracy, 22 April 2019 “ကျွန်တော့်ကို ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး ပြောခဲ့တာတွေက ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွှန့် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးရဲ့ဧည့်ခန်းမှာ ထိုင်ရင် တဦးတည်း ညာဖက်မှာ ထိုင်တယ် ။ ဘယ်ဖက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်အေး နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရွှေမန်း အပါအဝင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေက ထိုင်တယ်။ ဘယ်ဖက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ ပြောသမျှ ကန့်လန့် တိုက်တဲ့ သဘောမျိုး ဆက်ဆံတယ်။ ငါက ဝင်ဝင် …
Continue reading “ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဝင်း(ငြိမ်း)အကြောင်း စစ်ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိဟောင်း တစ်ဦး ဖွင့်ချ ———————————————————————————— ဝင်းနိုင်သောင်း”
အသားအရေလေးတွေလှပစိုပြေနေစေဖို့ရာအိမ်မှာပဲအလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကိုဝေမျှပေးမယ်လေ… နေ့စဉ်နေဒဏ်၊လေဒဏ်နဲ့ဖုန်မှုန့်တွေကြောင့်မျက်နှာအသားအရေရဲ့အပေါ်ယံအလွှာမှာအညစ်အကြေးတွေကပ်နေတတ်တယ်လေ… စိတ်မညစ်နဲ့တော့နော်.. နည်းလမ်းလေးပြောပြမယ်…. (၁) ပျားရည်လက်ဖက်စားဇွန်း(၁) ဇွန်း (၂) သကြားညိုလေးလက်ဖက်စားဇွန်းတစ်ဝက်ခန့် (၃) သံပုရာရည်လက်ဖက်စားဇွန်းတစ်ဝက် (၄) သဘာဝသံလွင်ဆီလေးလက်ဖက်စားဇွန်း(၁)ဇွန်းနဲ့ရောပြီးမျက်နှာတစ်ဝိုက်ကိုညင်သာစွာနှိပ်နယ်လိမ်းပေးပြီး၁၅မိနစ်ခန့်ကြာအောင်ထားပေးပါ.. ရေအေးအေးလေးနဲ့ပြန်သစ်ပေးလိုက်တဲ့အခါဖြူဝင်းကြည်လင်တဲ့နဂိုအသားအရေလေးကိုပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီနော်…. ပြီးပြည့်စုံသောအလှတရားအတွက်FACE ART…. 😍
ဧပြီလ ၁၈ ရက်နေ့ည မွန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ မော်လမြိုင်မြို့ မုပွန်ရပ်ကွက် အိုးရုံရပ်နေ ရဲမင်းပိုင် အသက် ၂၄ နှစ် ဆိုသူ၏ နေအိမ်တွင်း ၀င်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းစီးစဉ် တရားခံက ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီး ခိုးယူဖေါက်ထွင်းထားသော ရွှေထည်ပစ္စည်းများနှင့် ငွေစက္ကူများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသိမ်းစည်းရမိထားကြောင်းသိရသည်။ credit: hintha media